पोर्नोग्राफी प्रकरण : ६४ दिन जेल बसेर रिहा भएका राज कुन्द्रालाई लिएर के भन्छिन् शिल्पा शेट्टी ? | Online Nepal
पोर्नोग्राफी प्रकरण : ६४ दिन जेल बसेर रिहा भएका राज कुन्द्रालाई लिएर के भन्छिन् शिल्पा शेट्टी ?
काठमाडौं । पोर्नोग्राफी प्रकरणमा पक्राउ परेका भारतीय व्यवसायी राज कुन्द्रा सोमबार साँझ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति कुन्द्रालाई मुम्बईको अदालतले ५० हजार धरौटीमा रिहा गरेको हो । राज ६४ दिनपछि आफ्नो घर फिर्ता भएका छन् । अदालतले कुन्द्रासँगै उनका सूचना प्रविधि (आइटी) प्रमुख रियान थोर्पेलाई पनि रिहा गरेको छ ।
कुन्द्राले शनिबार अदालतमा बेलका लागि निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा चार्जशिटमा आफूले भिडियो अपलोड गरेको एउटा पनि प्रमाण नभएको दाबी गरिएको थियो।
कुन्द्रमाथि अश्लील भिडियो बनाएर ओटीटी प्ल्याटफर्ममा अपलोड गरेको आरोप छ। करिब एक महिनाअघि कुन्द्रालाई सोधपुछ गरी मुम्बई क्राइम ब्रान्चले पक्राउ गरेको थियो।
अदालतका कुन्द्राले वकिल प्रशान्त पाटिलले के अपलोड गर्ने भनेर सेलिब्रेटी र निर्माताले निर्णय गर्ने बताएका थिए। पाटिलले कुन्द्रा र रायनले के अपलोड गर्ने भनेर तय नगरेको जानकारी गराएका थिए। १४ सय पेज लामो चार्जशिटमा राजले भिडियो अपलोड गर्ने गरेको एउटा पनि प्रमाण नभएको वकिल पाटिलको दाबी थियो।
कुन्द्रा र उनका आइटी प्रमुख थोर्पे गत जुलाई १९ मा अश्लिल फिल्म (पोर्न फिल्म) बनाएर ऐपमार्फत रिलिज गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
व्यापारीसमेत रहेका कुन्द्राविरुद्द गत फेब्रुअरीमा क्राइम बेञ्चमा एउटा उजुरी दर्ता भएको थियो। त्यसको अनुसन्धानका क्रममा कुन्द्राको सहभागिता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। यता पति जेलमुक्त भएपछि शिल्पाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएकी छैनन्। यसअघि उनले पति कुन्द्रासँग डिभोर्स गर्ने खबर बाहिर आएको थियो।
पोर्नोग्राफी प्रकरणराज कुन्द्रा प्रकरणशिल्पा शेट्टी
जब आफ्नै आमाले पोर्न स्टार बनेकी छोरीको नग्न तस्वीर पत्रिकाको मुखपृष्ठमा देखिन….
आफ्ना पिता राज कुन्द्रा जेलबाट छुटेपछि छोरा बियानले लेखे भावुक स्टाटस
पोर्नोग्राफी प्रकरणमा राज कुन्द्रालाई मुम्बई अदालतले दियो जमानत
पोर्नोग्राफी प्रकरण : शिल्पाले छाडिन् पति राजको साथ, प्रहरीसामु दिएको बयानले झनै बल्झियो केस
दिल खोलेर हाँसेकी शिल्पा शेट्टीलाई प्रश्न, ‘पतिले कतिको जिन्दगी बर्बाद बनायो, यसलाई लाजसरम छैन ?’
पति राज कुन्द्रा जेलमै रहेका बेला पेट मिचिमिचि किन हाँसिन् शिल्पा शेट्टी ? (भिडियोसहित)
राज कुन्द्रासँग डिभोर्स गर्दै शिल्पा शेट्टी, छोराछोरीलाई ‘पोर्नोग्राफी’को पैसाबाट टाढा राख्ने
शिल्पा शेट्टीकी बहिनी शमिताले आउ मलाई चुम्बन गर भनेपछि…
श्रीमान् पोर्न भिडियो प्रकरणमा मुछिएपछि तनावमा रहेकी शिल्पा शेट्टी काममा फर्किइन्
‘बोल्न सिन’ दिने राधिका आप्टेलाई पनि राज कुन्द्रा पोर्नोग्राफी प्रकरणमा जोडियो
विश्वकप क्रिकेट: भारत र पाकिस्तान भिड्दै, हेड टु हेडमा को अघि ?
हेलिकप्टर भित्रबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- छिट्टै राहतको व्यवस्था गर्छु
अमेरिकासहित १० मुलुकका राजदूतलाई देश निकाला गर्न टर्कीका राष्ट्रपतिको आदेश
चोलेन्द्रका कारण सर्वोच्चको मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित, बारको जम्बो टोली छलफलमा
चीनमा एप्पलको व्यापार र त्यससँग सम्बन्धित ठूला प्रश्नहरु